Humni Raayyaa Ittisa Biyyaa Jigjigaa Seene
Sambata darbee qabee jeequmsa magaalaa Jijigaa keessatti uumameen lubbuun hedduun bade qabeenyaan barbadaa’uun gabaasamee jira. Mootummaanis nagaa akka eegsisuuf mootummaan humnoota isaa bobbaasee jira.
Humni raayyaa ittisa biyyaa har’a Jigjigaa seenuu isaa kan dhaga’an jiraattonni mana sagadaa ortodoxii Qiddus Mikaa’el keessa dahatan gammachuu isaan mul’isan yaaddoo nageenyaa jiru kan agarsiisu ture.
Shamarreen magaalaa Sanaa tokko bilbilaan utuun dubbataa jiruu naannoo sa’a 10tti raayyaan ittisa biyyaa as seenuun kan dhaga’ame jette.
Har’a qofaa namoota sadiitu rasaasaan dha’amee du’ee jetti.
Inni tokko waan irraa hafu iyyuu hin fakkaatu. Tokko adda isaa irra tokko immoo laphee isaa irra dha’an. Kanneen du’an jechuu koo ti. Ganda keenya keessatti dha’aman. Waldaan Mikaa’eliis naannoo dhuma sana. Kan keenyas manni kutaa lama qabu nu duraa gubateera. Rayyaan ittisa biyyaa amma seenuu isaan uummanni ililchaa jira kunoo.
Lolli kun sambata jalqabe. Amma garuu humni ittisaa galuu isaan uummati waldaa Mikaa’elii keessa jiru faarfataa Waaqaaf galata dhiyeessaa jira.
Mana sagadaa Mikaa’elitti raayyaan ittisa biyyaa kun marsuu isaanii ka dubbattu jiraattuun magaalaa Jigjigaa kun ennaa isaan ol seenan rasaasni dhuka’aa ture eenyu akka dhukaase garuu hin beekunu jette.
Guyyoota lamaan naannoo Somaalee keessatti jeequmsa uumameen waan hin eegamneef hedduu dhaaf waan akka tasaa ta’ee dha.